Tag: email nkewa | Martech Zone
Tag: email nkewa
5 Email Optimization Atụmatụ na toba ụba na Clicks
O nweghi otutu ihe kariri ihe omuma a site na ContentLEAD. Atụmanya jupụtara na email n'ihi ọnụ ala dị ala kwa ndu na ọnụego mgbanwe dị elu. Mana nke ahụ bụ nnukwu nsogbu… email gị na-efu na igbe mbata n'etiti narị otu narị ma ọ bụ puku puku ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. Kedu ihe ị ga - eme iji wee kọwaa ozi email gị site na igwe mmadụ? Lee 5 ihe dị n'ime mmebe nke ozi email yana mmetụta
Ọ dị mma ịhụ ka ụwa na-ezi ozi na-agbanwe site na ndị na-ajụ di iche iche ndị ahịa ga-eji kwa ụbọchị. Karịsịa bara uru na nyiwe ahịa azụmaahịa ndị a nwere ike ịkọ ma na-ekwukọrịta, tụọ ma dekọọ omume nke ndị ahịa gị na ndị ahịa gị. Martech Zone Ndị na - agụ akwụkwọ nwere ike nweta 45% Gbanyụọ ndenye aha ọnwa isii maka ndị debanyere aha 6igen nke Mailigen na - eji atụmatụ njikọ mmekọ anyị etinye na post a! Mailigen na-enye ahia email, na-akpali ahịa email, ozi ederede